Commando Shooting Games 2021 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
21.10.134 for Android
4.3 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（47.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Commando Shooting Games 2021: Real FPS Free Games
Real FPS ရိုက်ကူးမှုဂိမ်းများ - အခမဲ့အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများ - Real Command TPS fPS Non-stop လုပ်ရပ်များဂိမ်းအသစ်များကစားရန်လျှို့ဝှက် command ကိုရိုက်ကူးရန်ဂိမ်းအသစ်များ။
commanddo စွန့်စားမှုဂိမ်းများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်မှုနှင့်တကယ့်စွန့်စားမှုဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အတူ 3D အရေးယူအခမဲ့ဂိမ်းများ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားပါ။ Commando ရိုက်ကူးခြင်းဂိမ်းများမစ်ရှင်များသည်သူလျှိုလျှို့ဝှက်ကွန်မန်ဒိုဖြစ်သည်။ 5v5 Teathmatch စစ်ပွဲဂိမ်းများတွင်အစစ်အမှန်ရိုက်ကူးဝေဒနာစွန့်စားမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။ FPS ရိုက်ကူးရေးလှုပ်ရှားမှုအခမဲ့ဂိမ်းများသည် AI Multiplayer Games များအကြားထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်ကစားရန်သင့်အတွက်အကြံပြုသည်။ Games အသစ်များရိုက်ကူးရေးအတွက်တကယ့်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုလျှို့ဝှက် Command ဒို,
အဆင်သင့်။ ရည်ရွယ်ချက်။ မီး! Multiplayer Action Plaction Games တွင်ပျော်စရာရိုက်ကူးရန်အတွက်သင်၏ချေမှုန်းရေးအသစ်ဂိမ်းသေနတ်အသစ်ကိုရွေးပါ။ 2021. သင်အားအကြမ်းဖက်သမားများ မှစတင်. စိန်ခေါ်မှုမစ်ရှင်ဂိမ်းများအတွက် 3D အတွက်ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ FPS command အသစ်ဂိမ်းအသစ်တွင်ဘုန်းအသရေအတွက်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းများကိုပြသပါ။ 3D Commando သည်လှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှုဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်လုပ်ကြံခံရသည့်ဂိမ်းများကို GREED SNIPER SMARGER GOLDER ဖြစ်လိမ့်မည်။
FPS Commando Black Shadow adverture multiplayer mode:
အခမဲ့စစ်ပွဲအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ Multiplayer mode တွင်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအခမဲ့စစ်မြေပြင်ရိုက်ကူးရေးဂိမ်းများကိုအခမဲ့ကစားနိုင်သည့်ကစားသမားများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ အော့ဖ်လိုင်းရှိအဖွဲ့လိုက် Offline Free Games Play Multiplayer mode ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပါ။ အော့ဖ်လိုင်းအခမဲ့လျှို့ဝှက် Commando ရိုက်ကူးရေးဂိမ်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားများအပြည့်ရှိသောပြိုင်ဘက်အသင်းများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ 2021. TDM ပျော်စရာဂိမ်းများအတွေ့အကြုံအတွက်တပ်မတော်အားကစားသမားတစ် ဦး ကိုကစားပါ။ FPS commando သေနတ်သမားအသစ်ဂိမ်းများတွင်လွတ်လပ်စွာကစားရန်ကွဲပြားသော Multiplayer Modes ရှိသည်။ အဖွဲ့၏သေခြင်းတရားနှင့်တူသောကျော်ကြားသောရိုက်ကူးရေးဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင့်ဆင့်တိုးတက်မှုသည်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ပါ။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစနစ်မှာ, ရိုက်ကူးနေတဲ့ Simulator အသစ်ဂိမ်းအသစ်ကိုရိုက်ကူးတဲ့အော့ဖ်လိုင်းပျော်စရာကိုမြည်းစမ်းပါ။ အစစ်အမှန်ရိုက်ကူးမှုအခမဲ့သေနတ်ဂိမ်းများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်စိန်ခေါ်မှုမစ်ရှင်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်မစ်ရှင်များက 2021 ။ Gun Shooter Madiner Squad 3D FPS ရိုက်ကူးမှုဂိမ်းများသည်မရပ်နိုင်သည့်ဂိမ်းများအနက်မှဇာတ်လမ်းမပေါ်ရိုက်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Br>
သေနတ်ကိုင်ဂိမ်းများအတွက်စစ်မှန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာသေနတ်ဂိမ်းစစ်ဆေးရေးကော်စင်တာကိုသာကန့်သတ်ချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ရောမမြို့တွင် Roaming, သင်၏လက်၌ပစ္စတိုသည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းနှင့်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများကိုအဆုံးအထိသာရှင်သန်နိုင်ပြီး The Shooting Games Pistols ကိုသာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။ Command Dooking Free Games ၏ Bide Commundo Mode သည်သင်၏သေနတ်ပစ်တုန့်ပြန်မှုအချိန်နှင့်အစစ်အမှန်ဂိမ်းများကိုစစ်ဆေးပါမည်။
Inventory နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် - Real Commando ရိုက်ကူးရေးလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းတွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများ, သေးငယ်တဲ့အကွာအဝေးပစ္စတိုဝေတိုက်ဖျက်ရေးသေနတ်များနှင့် Sniper Free Games တို့ပါ0င်သောကစားခြင်းဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းများကိုပြသပါ။
Warnuous Command Attrange Actions Brights
Play Store မှ Mobile Games 2021 ကိုရိုက်ကူးသည့်အကောင်းဆုံး AI FPS Multiplayer တစ်ခုမှတစ်ခုကိုကူးယူပါ။
ဘာအသစ်လဲ Commando Shooting Games 2021: Real FPS Free Games 21.10.134
Let's get the latest version of "Immortal Squad" & show your shooting skills inathrilling battle.
These are the following Improvements in this "Version 21.8.130".
✔️ Implement game medals & Achievements in gameplay and profile
✔️ Added sentry gun & Exploded drums.
✔️ Bomb Defuse Mode Update ''Defuse animation, Directions & Bomb Explosion etc''
✔️ More Smooth Controls
FPS Commando Secret Mission - Free Shooting Games Android Gameplay #1
FPS Commando Secret Mission - Free Shooting Games Android Gameplay #2
20 Ultimate FREE FPS Games for PC 2021 (ACTIVE Player Base)
FPS Commando Secret Mission - Free Shooting Android Gameplay 2020 ( Part -2)
Apk Gaming Wee
FPS Commando Secret Mission - Free Shooting Games Android Gameplay
Gun Shooting Games: FPS Games 21.9.133
Commando Shooting Games 2021: Real FPS Free Games 21.8.131
Commando Shooting Games 2021: Real FPS Free Games 21.8.130